आशिष् - एक ... वचन को अर्थ, प्रयोग को उदाहरण
संसारमा बाँच्ने आशीर्वाद आफूलाई मानिस र त्यहाँ रूपमा पुरानो छ। संसारको सृष्टिको पहिले नै परमेश्वरले आफ्नो हरेक कार्य आशिष् दिनुभयो। आशिष् पहिलो विश्व, त्यसपछि जनावर को उपस्थिति सँगसँगै, र थप मानव छ छ। हजारौं वर्ष आशीर्वाद र कुनै पनि समयमा हामी प्रत्येक एक को भाग्य परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
आशिष् के हो
आशिष् - शब्द दिन्छ आशिष्। बलियो आध्यात्मिक कार्य मौखिक वा प्रार्थना को रूप मा सिकाइएको छ कि। संस्कार हात thereunto अक्सर उहाँलाई। शब्द, उहाँलाई तदनुसार ग्रेस बोलाए सुरक्षा र परमेश्वरको हेरविचार, आशीर्वाद सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। जसले आशिष् सोध्छन् सहायता र आशा परमेश्वरको वा आफ्नो एजेन्ट देखि लागि प्रतीक्षा, आफूमा विश्वास छैन, नम्रता बुझेका छन्। शब्द, परमेश्वरको सेवक सिक्छन् भनेर पहिचान र सम्मान परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्न मौका सोध्छन् पुष्टि गर्छ सोधेर "आशिष् दिनुहुन्छ, सर,"।
को आफ्नो चर्च आशिष् को अभिभावक खडा पछि बल मा दोस्रो स्थानमा। आफ्नो आमाबाबु प्रभु आफूलाई आज्ञा पढ्नुहोस्। बच्चाहरु भन्दा प्राकृतिक उर्वर अधिकार सुरक्षित गर्न, परमेश्वरले आमाबाबुको शक्ति (आशिष् वा श्राप) दिनुभयो। अब्राहाम, नूह, याकूब र इसहाक को उदाहरण, हामी धर्मशास्त्रबाट हेर्नुहोस्। भगवान अक्सर आमाबाबुले मार्फत छ मान्छे ड्राइव। नम्र र स्मार्ट मान्छे सधैं आफ्नो बुबा र आमाको आदर गर्छन्।
आशिष् काम र फल फलाउँछ
आशीर्वाद शब्दहरू, को पाठ्यक्रम, ईश्वरीय विशेष अधिकार हौं। तर येशूले यो हामीलाई श्राप आशीर्वाद आवश्यक छ, सताउने र हामीलाई दुर्व्यवहार गर्नेहरूका लागि हामीलाई घृणा र प्रार्थना गर्नेहरूलाई राम्रो गर्न भन्दै मसीहीहरू अझै पनि डाँडाको उपदेश यो अधिकार दिनुभयो। अलग हामी ख्रीष्टको मात्र यसको योग्य गर्नेहरूलाई आशिष् को शब्द बोल्न हामीलाई भनिन्छ छ, तर पनि curses गर्ने एक ठेगाना र तपाईं घृणा गर्न भन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो संसार परमेश्वरको वचन द्वारा सिर्जना गरिएको छ, र त्यो हाम्रो संसारमा हुन्छ सबै - हाम्रो शब्दहरूको परिणाम हो। कुनै पनि कार्य को शुरुवात मा, कार्यहरू, मानव शब्द को उपलब्धिहरू लायक छ। र देखि, राम्रो वा नराम्रो शब्द परिणाम निर्भर छ।
एक श्राप वा आशिष् - यो संसारमा सबै शब्द दुई मोर्चों विभाजित छन्। बाइबल त्यहाँ सराप्न र कसले आशीर्वाद ती आशीर्वाद गर्नेहरूलाई द्वारा श्राप गरिनेछ भनेर भन्छन्। खराब मानिसबाट श्राप शब्दहरू, आरोप, Murmurs आउन र आफूलाई मार्फत पारित, आफ्नो मुख मार्फत यी शब्दहरू मुख्यतया आफूलाई गंदा। कहिलेकाहीं यो शब्द कुनै अर्थ छैन जस्तो देखिन्छ, तर के हामी बीउ ड्रप, र फल बाहिर बारी हुनेछ। आशिष् दया र प्रकाश बोक्न। रिस बयान condemning, इन्कार शैतानको गर्न ठाउँ दिन्छ। फल उपयुक्त हो - निराशाले, आँसु, चोट, हानि। अपमान र जस्तै।
शब्द, हामी हाम्रो भविष्य निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। आशिष् - यी हामीलाई बढ्न र अगाडि सार्न मौकाको कि शब्दहरू हुन्। अरूलाई आशिष्, हामी परमेश्वरको हात मा सामाग्री शब्दहरू को रूप मा दिन, र उहाँले हाम्रो भविष्य तयार हुनेछ। हाम्रो शरीर र हाम्रो प्राण असर कि "भाइरस" को विरोध छ जो एक चिकित्सा, रूपमा आशिष्, हाम्रो बल बहाल। तपाईं आफैलाई निन्दा गर्न सक्दैन, ostensibly केही मलाई असम्भव छ भनेर तर्क, म धन र जस्तै छैन। तपाईं के (स्वास्थ्य, बच्चाहरु) को लागि प्रभु धन्यवाद, र उहाँले आफ्नो धन वृद्धि हुनेछ।
धन्यवाद, पनि, आशिष्, यो नम्रता एक चिन्ह हो किनभने। र नम्र अनुग्रह उतरती। तपाईं सेवा काम केही प्रकारको लागि मान्छे धन्यवाद भने, एतद्द्वारा तिनीहरूलाई आवश्यक भनी स्वीकार गर्नुहुन्छ। कृतज्ञता शब्दहरू बोल्ने, तपाईँ तिनीहरूलाई आशिष् को शब्द पठाउने छौं। आफ्नो मुख मार्फत के बित्दै, एक hundredfold तपाईं आउनेछ।
आमा र बुबाको आशिष्
पुस्तामा बीच लिंक गर्न बन्द भङ्ग कहिल्यै र पैतृक ऊर्जा आशीर्वाद को एक अनुष्ठान एक लामो समय को लागि खुला बग्ने। परिवारमा वरिष्ठ साना आशिष् दिनुभयो। विवाह अघि आशिष्, को नवविवाहितहरूका बलियो, नजिक-बुनना परिवार, घर मा समृद्धि, आध्यात्मिक अनुकूलता सिर्जना सुनिश्चित। यो अनुष्ठान ठूलो महत्व थियो। उहाँले ती शक्ती सबै पुस्ताका अस्तित्व सुनिश्चित पहुँच दिनुभयो। एकै समयमा आमाको आशीर्वाद - अर्थ र कारण - यो जीवन, पिता को शक्ति छ। अविश्वसनीय कस्मिक शक्ति पिता (दुवै स्वर्गीय र जैविक) गर्न सम्बोधन जो ती अपील छ। कसरी घाटा वा संकुचन सपना सामना गर्न - आमा भावनात्मक घटक को जीवन मा हामीलाई सिकाउँछ। मेरी आमाको आशीर्वाद सोध्न, आफ्नो जीवनको एक नयाँ अध्याय खोल्न नबिर्सिनुहोला। आफ्नो आमा को ऊर्जा को लडी छ - वास्तवमा हरेक बच्चा किनभने यो, तपाईं सफलता सुनिश्चित हुनेछ। त्यसैले, यो यसको भाग्य प्रभावित गर्न सक्नुहुन्छ। सङ्कल्प, जिम्मेवारी, प्रतिबद्धता, आशावाद, उदारता - पिता आफ्नो बच्चा एक पुरुष शक्ति र ऊर्जा दिनुपर्छ। उदारता र आत्म-अनुशासन। तपाईं आमाबाबुको साथ सम्बन्ध बिच्छेदन छ भने यी सबै घटक जीवनमा उलङ्घन।
आमाबाबुको आशिष् को सार
आमाको आशीर्वाद - एक सुरक्षा रेशमको कोयो बच्चा विभिन्न अप्रिय परिस्थिति मा गिर गर्न अनुमति गर्दैन, सही दिशा मा आफ्नो कदम निर्देशन। पनि प्रेरित आशिष् लामो दूरी भन्दा। अभिभावकको आशिष् प्राप्त गर्ने व्यक्ति, invulnerable बन्नेछ। आशिष् को अनुष्ठान पुरानो पुस्ता गर्न बांध कि मुद्दा राख्न मद्दत गर्छ। परिवारमा केही अवस्थामा पूरा मा आमाबाबु, बाजेबज्यै, त्यसैले fastened पुस्तामा बीच जडान आशिष् दिनुभयो। तपाईं अझै पनि आफ्नो आमाबाबु बस्नुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई कल आफूलाई, बच्चाहरु को लागि आशिष् माग्छौं, र तपाईं आफ्नो जीवन कसरी परिवर्तन गर्न देख्नेछन्। जटिल संस्कार गर्न वैकल्पिक रिसोर्ट। पर्याप्त शब्द अभिभावक: "म तपाईंलाई आशिष!"। बित्तिकै यी शब्दहरू क्लिक रूपमा, पुस्तामा बीच जडान सुरु हुन्छ। हामी आफ्नो जरा संग स्पर्श गुमाउन भने, हामी deteriorate र मर्न थाल्छन्। एक व्यक्ति जरा को प्रकारको पहुँच छैन, जीवन भिज्न गाह्रो, यो कठिन विभिन्न कठिन परिस्थितिहरूको सामना गर्न छ।
त्यसैले उपासकहरू पुजारी बारी - अक्सर चर्च मा तपाईं वाक्यांश "म आफ्नो आशिष् माग्छु" सुन्न सक्नुहुन्छ। पुजारी को आशिष् धेरै अर्थ छ:
स्वागत छ। पुजारी अभिवादन गर्न हात मात्र बराबर दर्जा को, बाँकी उहाँको आशिष् लिनुपर्छ सही हुनेछ। यो समारोह हत्केलामा (दायाँ बायाँ माथि) थपियो हुनुपर्छ लागि, आशिष् लिन र आफ्नो हात चुम्बन पवित्र मर्यादा गर्न आदर प्रतिपादन। बस यो लागि! अन्य कुनै अर्थ, यो समारोह छैन। पुजारी को आशिष् उहाँले चर्च लुगा मा र मन्दिरमा थियो पनि भने, कहीं प्राप्त गर्न सक्छन्। तर उहाँले तपाईं परिचित छैन भने, सडक पुजारी neoblachennogo परेशान छैन।
आशिष् को दोस्रो अर्थ - विदाई, अनुमति, केही कार्य को लागि अनुमति। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कदम अघि तपाईंले पनि पुजारी को आशिष् लागि माग र आफ्नो हात चुम्बन गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्य आशिष्हरू सेवा समयमा recited। शब्दहरू "शान्ति सबै" वा "को हाम्रो प्रभुको अनुग्रह" संग पुजारी पार सबै उपासकहरू overshadows। प्रतिक्रिया, तपाईंले नम्र भई आफ्नो टाउको bow गर्न आवश्यक छ। एकै समयमा हात गुना गर्न आवश्यक छैन।
पवित्र वस्तुहरु द्वारा छायांकित जब तपाईं पहिलो, क्रूसमा को साइन इन त्यसपछि धनु बनाउनु पर्दछ।
को Kulikov युद्धमा दिमित्री Donskoy आशिष्
पवित्र मानिसहरूबाट आशिष् शब्दहरू सधैं रूस मा एक ठूलो महत्व छन्। यसले सम्पूर्ण इतिहास Mongol-तातार जुवा देखि रूसी मुलुकमा मुक्ति मा सुरु बिन्दु बन्द र भयो कि Kulikov युद्धमा अघि, 1380 मा भयो। सबैले आशिष् Dmitriya Donskogo को Kulikov युद्धमा को कथा याद, त्यो पायो कि Radonezh को सेन्ट Sergius मुख बाट। तपाईं sechu गर्न अग्रिम अघि, राजकुमार त्रिएकको विहारको गर्न पुरानो मानिस गए। गुम्बामा व्यवस्थित छ जो भोजन, आइपुगे पछि, Reverend, युद्धमा मा दिमित्री आशिष् पवित्र पानी संग छर्कियो र शब्दहरू पठाइएको, "प्रभु तपाईंको संरक्षक हुनेछ। उहाँले खलनायक जीत र तपाईं महिमा हुनेछ। " कुमारी, युद्धमा भर सैनिकहरू सँगसँगै प्रतिमा प्रेरित र सैनिक र आफ्नो नेता रक्षा। सजिलो विजय पायो छैन, तर सबै समय मा दिमित्री Donskoy महिमा।
पक्कै - यो अनिश्चितता वा शङ्काको? शब्द को मुख्य विकल्प
Buggy - यो के हो? विस्तार तथ्य
को नर्वे आधिकारिक भाषा: कसरी जस्तै र साझेदारी को के प्रकार के थियो, उत्पत्ति
खाना: यो हामी खाना वा हामी के बाँच्न के हो?
कहाँ र स्तन दूध कसरी भण्डारण गर्न
चकलेट क्यान्डी को आफ्नो जीवन: अवधारणा नियम
एक chromatid के हो? शिक्षा chromatids
सर्वश्रेष्ठ साहसिक मताधिकार। "क्यारेबियन को डाकू" को अभिनेता
Fandom के छ। "Fandom" को अर्थ
लोकप्रिय नाइटक्लब Anapa
वयस्कहरुमा साइनसाइटिस को लागि एंटीबायोटिक्स: नाम र समीक्षा
के आउँदै छ? परिभाषा र सार
स्वादिष्ट कावीयार फर्सी: कसरी तयार
क्रीम "शिष्का रोक्नुहोस्": समीक्षा, आवेदन
को trigeminal स्नायु को सुनिंनु: रोग र यसको उपचार को लक्षण